Onye na-ese ihe onyoonyo na-emeri ihe nkiri Josh Ausley leghachiri anya n'afọ nke mmepụta n'oge ọrịa na-efe efe | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Onye na-ese ihe onyoonyo onyoonyo Josh Ausley lere anya n’aho mmeputa n’oge oria ojoo a
DP Josh Ausley jiri Cartoni Focus 12 ya mee ihe na setịpụrụ Budweiser a
Onye na-ese ihe onyoonyo onyoonyo Josh Ausley lere anya n’aho mmeputa n’oge oria ojoo a
Igwefoto Josh Ausley guzobere n'iji Cartoni tripods
Onye na-ese ihe nkiri na-akọwa ihe kpatara ndị obere, ndị ọrụ ike karịa na-achị afọ, na-enye amụma ya maka ọdịnihu, ma na-akọrọ ahụmịhe ya na Cartoni tripods
Ikpeazụ March, na Los Angeles Mpaghara, otu n'ime ihe dị egwu nke Hollywood alaeze ntụrụndụ, sonyeere ndị ọzọ nke ụwa mgbe ọrịa a na-efe mere ka onye ọ bụla nọ na mpaghara nọrọ n'ụlọ. Ọnụnọ ụlọ na mmechi ụlọ ọrụ na-esochi zigara ụwa dum na-emepụta ihe na ọdụ, yana Los Angeles mpaghara e mere atụmatụ ịbụ ndị funarụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde ọrụ. E zigara ndị na-eme ihe nkiri n'ụlọ, ọtụtụ ndị na-ese ihe nkiri nọọrọ onwe ha chere ọdịnihu a na-ejighị n'aka.
Anyị jidere onye na-ese ihe nkiri na-emeri mba ụwa bụ Joshua Ausley, bụ onye kewara oge ya n'etiti Los Angeles na Atlanta, iji nweta echiche ya na afọ gara aga. Ausley arụ ọrụ na ihe nkiri eserese na ọrụ maka Marvel, HBO, na Netflix, na ndị ọzọ. Ọ na-eleghachi anya azụ n'afọ ahụ, echiche ya banyere ọdịnihu, ma kesaa ahụmịhe ya site na iji njem Cartoni.
Mmepụta ihe nkiri na imepụta vidiyo na-emecha mechaa na-esochi COVID ma nọrọ n'ụlọ iwu, mana ị na-arụsi ọrụ ike. Nwere ike ịgwa m maka ụfọdụ ọrụ ị na-arụ.
Agbagburu m azụmahịa maka XFINITY, soro ihe ngosi ederede nke metụtara oge dị ukwuu n'okporo ụzọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dịpụrụ adịpụ nye onye ahịa, nke pụtara na ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe na-anọ n'ụlọ na LA ma ọ bụ UK (ma ọ bụ ebe ọ bụla ha nọ) ma lelee ma ọ bụ duzie oge ịse ahụ site na ọrụ ntanetị.
Ntughari di iche iche abụrụla isi ihe iji mee ka ọrụ na-aga. Mgbe ọrụ azụmaahịa anyị kwụsịrị, anyị nwere ike ịmalite ngwa ngwa wee malite ịme mgbede ndị dịpụrụ adịpụ, dị ka ihe nkiri TV, iji nyere anyị aka ịgafe ruo mgbe ihe dakwasịrị.
Hụ ntụpọ XFINITY nke Josh Ausley gbara n'oge ọrịa na-efe efe:
Comcast / Xfinity - Gwuo egwu si Mmepụta Imperium on Vimeo.
Otu n'ime oge mbu oria ojoo gi bu ahia ubochi ncheta Budweiser "Were nkeji abuo". Kedu ka ọ dị ka ịrụ ọrụ na azụmaahịa ahụ n'oge oke ọrịa a na-efe efe?
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ bịakwutere anyị, DAVID, ka anyị bụrụ akụkụ nke mkpọsa obodo dị iche iche na-asọpụrụ ma ndị agha ochie na ndị ọrụ nlekọta ahụike n'ihu maka ụbọchị ncheta nke Budweiser. Ọnọdụ dị iche iche gaara achọ ndị ọrụ dị iche iche ebe ọ bụ na amachibidoro njem. Agbanyeghị, dịka usoro ihe okike gbanwere, anyị nwere ohere iji mepụta ntụpọ niile n'onwe anyị. Enwetara m onye na-emepụta ihe nwere ahụmahụ, Liz Stovall nke Fenton Pictures, iji nyere m aka ịme azụmahịa ka m wee nwee ike ilekwasị anya n'ịduzi foto ahụ. Ebe a na-akọ akụkọ banyere onye otu ọrụ agha na onye ọrụ ahụike, na-etinye ha site na ịgbanye ihe nkiri yiri nke ahụ egosiri na ngosipụta ihuenyo.
Anyị nwere ihe na-erughị otu izu iji chịkọta ya ọnụ, nke gụnyere ị nweta amamihe na ebe dị iche iche. N’idebe ihe niile pere mpe n’ihi Covid na arịrịọ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ, anyị kpọkọtara otu ndị na-erughị iri wee gbaa ihe niile n’otu ụbọchị. Ebe ahụ dị n'ikuku ihe na-erughị otu izu mgbe e mesịrị!
Lelee azụmaahịa Budweiser Josh Ausley gbara n'oge ọrịa a, na-eji Cartoni Camera Support:
Nwere ike ịkọwa etu ahụmịhe a siri dị iche na ụdị ọrụ a na-ahụkarị?
Oge ịgba a ziri ezi ka oria ojoo a na-arị elu ebe a na US. N'oge ahụ, e nwere ọtụtụ ihe anyị na-amaghị na enweghị usoro iwu nabatara ebe niile, yabụ anyị mere ihe niile anyị nwere ike ime [iji nọrọ na nchekwa]. Ndị ọrụ niile na-eyi PPE ma nọrọ ụkwụ isii iche oge niile. A na-enyocha ego okpomọkụ n'ụtụtụ. A na-akpọgara nri ehihie n'èzí ma kewapụ ya na ihe ndị iche iche.
Nke a dị obere tupu ezigbo oge nzaghachi nzaghachi ghọrọ ụkpụrụ. N'ihi ya, anyị zigara ndị ahịa foto na nseta ihuenyo ahụ iji nweta nzaghachi na nnabata ha. Anyị ka ga na-arụ ọrụ ngwa ngwa!
Nwere ike ikwu maka gia ị ji maka oge ịse?
Anyị gbara na Arri Alexa Mini m, jikọtara ya na Zeiss mk3 Super Speeds. Maka nkwado, anyị jiri njem nlegharị anya 22 Cartoni na EasyRig maka gbaa aka. Ekwesiri m ịdọrọ uche m ebe ọ bụ na enweghị m 1st AC maka oge ịse.
Ebe ọ bụ na ndị ọrụ ahụ pere mpe, anyị jiri ngwugwu ọkụ na-enweghị ọkụ gụnyere nke 800-watt Joker HMI, ngalaba Litepanels Gemini, na ụzọ Kino Flo Họrọ 30 LEDs.
N'inwe ndị ọrụ pere mpe, kedụ mkpa ọ dị inwe obere, nke fechaa, nke kwesịrị ntụkwasị obi dị ka Cartoni gị?
Obere ndi oru ugbo putara obere aka iji nyere aka megharia gia. Ndị mmadụ na-eyi ọtụtụ okpu ugbu a, ma ọ bụrụ na ị na-ebuwanye ibu, ị ga-eji nwayọ nwayọ ịmegharị. Inwe isi tripod dị fechaa nyeere m aka nke ukwuu dịka na enweghị m AC maka oge ịse. Enwere m ike iburu osisi na igwefoto n'otu oge ka m kwaga n'etiti ntọala ma mee obere mgbanwe na ọnọdụ igwefoto dị ka achọrọ.
You rụọla ọrụ na osisi ọzọ ọ bụla n'oge ọrịa ahụ na-efe efe (ị nọ na Mexico n'oge na-adịbeghị anya maka oge ịse, kwa, nri?)
M laghachitere site na Cancun na-ese vidio maka ọtụtụ ebe ntụrụndụ niile iji gosipụta usoro nchekwa COVID ha ma mee ka ndị mmadụ kwenye ịlaghachi. Probablylọ ọrụ ndị njem nwere ike bụrụ ihe kacha sie ike na nsogbu a niile, dịka nwunye m maara nke ọma ebe ọ bụ ọkachamara na njem. Mana enwere ụfọdụ ebe ndị America nwere ike ịga. Maka oge ịse a, m wetara m Sony FX9 na Gbado anya HD Usoro Cartoni tripod, ngwugwu dị mfe nke nyeere m aka ịdị na-agagharị agagharị. Ihe Gbado anya HD bụ zuru okè nke, na ibu ibu iji na FX9 na-eme ka dabere agbapụ a dum ọtụtụ mfe.
Kedụ ka i chere nrịanrịa a ga-agbanwe mmepụta?
Na obere oge, o doro anya na anyị ga-eyi PPE, na-achọpụta ọnọdụ okpomọkụ, yana nyocha oge niile na ogologo oge. Produfọdụ ihe nrụpụta na-etinye ndị na-arụ ọrụ n'ime kewapụpụ tupu ịmalite, ọkachasị na mba ndị ọzọ. Mmepụta ndị dị n'ime obodo buru ibu ugbu a, ndị ahịa na-abanye n'ime oge ịse site n'ụlọ ha ma ọ bụ n'ọfịs ha.
Echere m na anyị ga-ahụ ụfọdụ mgbanwe ogologo oge site na nke a, ọbụlagodi mgbe ọrịa ahụ gafechara. Dị ka ọtụtụ azụmaahịa ugbu a nwere echiche dị mma karị na-arụ ọrụ site n'ụlọ, echere m na ndị ahịa ga-amatawanye na ha agaghị efega ọtụtụ mmadụ maka mmepụta. Ome dịpụrụ adịpụ ga-abụrịrị ihe ama ama, iji chekwaa nrụpụta n'oge, ndị ọrụ, na ụgwọ njem. Ihe na-akpata nsogbu a bụ na ọ na-ewe ogologo oge iji nweta nzaghachi na nnabata ndị ahịa, yabụ na a ga-atụle mmetụta ahụ.
O doro anya na anyị kwesịrị ime mgbanwe iji na-aga n'ihu na 2021.
Ogologo oge ole ka ị na-eji Cartoni?
Azụrụ m njem Cartoni mbụ m na 2016 site na mmemme azụmaahịa na-agbanwe site na onye nrụpụta ọzọ. Achọpụtara m ozugbo na ọ bụ nnukwu nkwalite maka m. Agbalịrị m ọtụtụ usoro dị iche iche, mana ngwugwu Cartoni kụrụ isi ihe niile n'emebighị ihe ọ bụla. Usoro siri ike, na-adịgide adịgide nke nwere ike ịnagide iti ihe na isi mmiri nwere ike ịmegharị maka ịdị arọ nke ọtụtụ igwefoto dị iche iche. Etuola m atụmatụ anọ ya na ya ma jupụta na ya. Ọ na-ejide ya nke ọma.
Kedu isi mmiri ị nwere?
Enwere m isi nke 22 gbadoro anya tinyere Focus HD. Ọ dị mma ịnwe ngwugwu dị oke oke na nke nwere ike ijikwa nnukwu ibu. Ha abụọ nwere ike ijikwa ihe ọ bụla tụbara ha!
Manios Digital bụ naanị onye na - ekesa US nke ngwa ngwa ngwa ngwa gụnyere Cartoni Igwefoto Nkwado, ọkụ Kinotehnik, na batrị Hawk-Woods na ngwa.
Ihe kacha ọhụrụ site na Bright Co (-ahụ ihe niile)
Onye na-ese ihe onyoonyo onyoonyo Josh Ausley lere anya n’aho mmeputa n’oge oria ojoo a - April 6, 2021
Lablọ nyocha dị na Texas kwadoro ikike CARTONI UV-C BOXER iji kwụsị COVID-19 naanị na 3 nkeji - January 18, 2021
Laghachi na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu: Cchụkwudo onye na-eme nchọpụta ihe na National Geographic na onye ọrụ Cartoni tripod Federico Pardo - November 25, 2020
igwefoto Cartoni na-akwado ụgbọ njem tripods COVID nchekwa COVID nchekwa na ịtọ dijitalụ mmadụ ozi ahia Akụkọ akụrụngwa Ihe ngosi vidiyo 2021-04-06
Previous: VFX Legion Na-emepụta Mmetụta maka 'Ọkara Brothersmụnna'
Osote: Ndagwurugwu Grass na-ebuli mmụba nke GV Media Universe na Nhọpụta nke Barbara DeHart